नेपालगन्ज छटपटाइरहेछ ! जिम्मेवार को ? – Mission
नेपालगन्ज छटपटाइरहेछ ! जिम्मेवार को ?
प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख १२, २०७८
बिहीबार भेरी अस्पतालका प्रमुख डा प्रकाश थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे,‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर। कोभिडको लागि छुट्टाएर राखिएका बेड भरिभराउ । जटिल प्रकारका बिरामी आउने क्रम जारी छ ।’
उनी अघि लेख्छन्,‘हामी मुखदर्शक भएर हेर्ने बाहेक अन्य विकल्प छैन । अझै आगामी दिनमा भयावह हुने स्थिति छ ।हामी शतप्रतिशत दिन्छौ ।सचेत बनौँ ।अरुलाई सहयोग गर्न पनि अनुरोध छ ।’
यस्तै भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद धिताल निरासा प्रकट गर्दै लेख्छन्, ‘जिम्मेवार कोही बन्न सकेनन्,अक्सिजन लेबल ८६ भएका बिरामीलाई आँखाभरी आँशु लिएर बेड छैन भन्दा कति पीडा हुन्छ होला । अवस्था भयावह छ । अस्पतालमा बेड छैन अब कति गालि खाने अस्पताल परिवारले ।’
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रका फोकल पर्सन तेज ओलीले सामाजिक सञ्जाल मै अस्पतालमा बेड थप्ने र अक्सिजनको व्यवस्थापनमा सबैको ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनको अन्तिम आशा छ, बाँचेसँगै रेल चडौला अहिले कृपाया ज्यान बचाइदिनुहोस् ।
बाँकेमा पछिलो चरणको कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा कोरोना फोकल पर्सन रहेका, हाल स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियामा कार्यरत नरेश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भेरी अस्पतालमा कोभिड आइसोलेसन भरिएर बिरामी बाहिर बेड बिना छटपटाइरहेको बेदनात्मक दृष्य देखिन्छ ।’
अब अनिवार्य रुपमा हरेक स्थाानीय तहमा अक्सिजन सहितको ५० बेडको व्यवस्था १ हप्ताभित्रै गरिएन भने बिरामी अक्सिजन नपाएर मर्ने अवस्था छ ।
अहिलेको नेपालगन्जको खास अवस्था हो । नेपालगन्ज फेरी एकपटक कोरोनाले आक्रान्त भएको छ । नेपालगन्जका सडकमा प्रचण्डगर्मी छ । अस्पतालमा बिरामीका आर्तानातहरु सुन्न नसकिने अवस्था छ । कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी छटपटाइरहेका छन् । बुधबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको नेपालगन्जमा दैनिक कोरोनाका कारण अवस्था भयावह बन्दै गइरहेको घाम झैँ छर्लङ छ ।
बिहीबार मात्रै बाँकेमा ३८८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका थिए । यो संख्या पछिल्लो एकसाता यता कै सबैभन्दा बढी हो । एकातिर कोरोना संक्रमितको उपचार, अर्कातिर अन्य रोगीहरुको समेत उपचार गराउनु पर्ने बाध्यता अस्पताललाई छ ।
तर कोरोनाका बिरामीहरु दैनिक बढिरहेकोले कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चूनौतीको विषय हो । अस्पताल प्रशासनले सहयोगको लागि सरकारलाई गुहार गरिरहेको छ । भेरी अस्पतालमा रहेको १ सय ४२ बेड क्षमताको कोभिड वार्ड पूरै भरिएको छ। नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरको ५० बेड क्षमताको कोभिड वार्ड पनि खाली छैन।
अहिले अस्पतालमा दैनिक रुपमा संक्रमितको संख्या बढ्ने मृत्यदर थपिने गरेका छन्। दैनिक कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या सरदर १ देखि ३ जना रहेको छ । एकसातामा विभिन्न जिल्लाका दर्जन भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ ।कोरोनाका कारण २० वर्षीय नर्सदेखि ८० बर्षसम्मका बृद्धहरुले कोरोनाका कारण मुत्युवरण गर्नु परेको तितो यर्थात भोगिरहेको छ, नेपालगन्ज । सद्भावको सहर नेपालगन्जले अहिले सदभाव जोजिरहेको छ । मानवीयता खोजिरहेको छ, कोरोना बिरामीले उपचार र जीवनको याचना गर्दै अस्पतालको बेडबाट अनुनयविनय गरिरहेका छन् ।
निषेधाज्ञा उपयुक्त विकल्प होइन
विश्वभर कोरोना संक्रमण नेपालमा अलि पछि देखियो । नेपालमा गत वर्षको चैत्र महिनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । त्यतिबेला कोरोना संक्रमण दर विस्तारै बढ्दै थियो । बाँकेमा भने कोरोना बैशाख महिनाको १९ गते देखियो । नेपालगन्जमा भारतबाट आएका एक मुस्लिम बृद्धमा देखियो । नेपाल सरकारले भने एक महिना अघि चैत्र ११ गते नै लकडाउन घोषणा गरिसकेको थियो । पछि नेपालगन्ज कोरोनाको हटस्पट बन्यो ।
नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउने दोस्रो व्यक्तपनि बाँकेको नरैनापुरका युवा हुन् । उनी २५ वर्षका थिए । भारतबाट हिडेर आएका उनले क्वारेन्टाइन मै ज्यान गुमाए । पछि नेपालगन्ज निकै प्रभावित बन्यो । बाँकेमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या र प्रभावित संख्या नेपालगन्ज मै बढी छ । भारतीय सिमा जोडिएको नेपालगन्ज त्यतिबेला पनि पनि भारतबाट आएका नागरिक कै कारण प्रभावित बनेको थियो ।
पछिल्लो समय दोस्रो पटक नयाँ भेरियन्ट सहित देखा परेको कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ ।अहिलेपनि भारतबाट आएकै नागरिकका कारण र सरोकारवाला निकायको गैरजिम्मेवार पन रहेको छ ।
बाँकेमा पछिलो चरणको कोरोना संक्रमणका बेला कोरोना नियन्त्रणमा राम्रो काम गर्न नसकेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुुर खड्का गृह मन्त्रालयको कारबाहीमा परेर मन्त्रालय मै तानिए ।
नेपालमा निजामति कर्मचारी वृतमा उत्कृष्ट अधिकारीको छवि बनाएका राम बहादुर कुरुम्वाङ प्रजिअका रुपमा आए । कोरोनाका कारण आक्रान्त भएका बाँकेबासीका लागि उनको आगमन खुसीको खबर थियो । बाँकेबासीको आशा र अपेक्षा अनुसार उनले कोरोना संक्रमण रोकथाममा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । बाँकेबासीको आशा अनुसारको काम उनले गरेपनि।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाममा कुरुम्वाङले उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उनी बाँकेको प्रजिअ रहेकै बेला बाँकेमा पुनः कोरोना संक्रमण बढ्ने बेला उनको सरुवा भयो । इलाका प्रशासन कार्यालय कैलालीमा उनको सरुवा भएपछि बाँकेमा निराशा समेत छाएको थियो ।
खासगरी उनको काम र गृह मन्त्रालयले अन्याय गरेको भन्दै उनका शुभचिन्तकले विरोध जनाएका थिए । उनको ठाउँमा शिवराम गेलाल बाँके आए । उनी यहाँ आएको केही समय मै बाँकेमा कोरोना संक्रमणको अवस्था गत वर्षको जस्तै भएको छ ।बाँकेमा कोरोना संक्रमणलाई न्यूनिकरण, रोकथाम र व्यवस्थापन गेगालको अग्नी परिक्षा हो । यसमा उनी कत्तिको सफल हुन्छन् त्यो भविश्यले नै बताउनेछ । तर शुरुवात गत्तिलो देखिएको छैन । अहिले बाँकेबासीले कुरुम्वाङको माग गरिरहेका छन् ।
नेपालगन्जलाई निषेधाज्ञा गर्ने विषयपनि उनी अलमलमा देखिएका थिए । पछि जिल्लास्थित सरोकारवालाहरुको चर्को दबाबपछि उनले निषेधाज्ञाको निर्णय गरे । गत बैशाख ७ गते जिल्ला स्थित सरोकारवालाको बैठकले उनलाई सिफारिस गरेको हो । ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म उनले निषेधाज्ञाको निर्णय गरे । निषेधाज्ञाको आज तीन हुँदैछ ।
तर अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसकेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय अहिले पनि अलमल मै छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल अलमलमा परिरहेका छन्। बाँके जिल्लाबाट संघ र प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले पनि यसमा कुनै चासो देखाएका छैनन्।
अघिल्लो वर्ष कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन कार्यमा सक्रिय रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि यसपटक भने बेवास्ता गरिरहेका छन्। यहाँका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, नागरिक समाजले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिरहेका छन्। तर, उनीहरुको आग्रह अहिलेसम्म, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसैले पनि नसुनेको गुनासो बढ्दै गइरहेको छ।
जिम्मेवार निकाय मौन बसेको भन्दै कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश समेत पोखेका छन्। निषेधाज्ञा उपयुक्त विकल्प नभइ एउटा माध्यम मात्रै हो । त्यसैले नाकामा सुरक्षा स्थिति कडाई, पिसीआर टेस्टलाई तिव्रता, संक्रमितकोहरुको उचित उपचार र ब्यापक जनचेतना फैलाउन सक्नुपर्छ ।उचित व्यवस्थापन र सक्रिय जनशक्ति परिचालन तथा कडाई अहिलेको आवश्यकता हो ।
यी हुन सक्छन् बैकल्पिक विकल्प ?
अहिले भारतबाट दैनिक चारदेखि ६ हजारको बीचमा नेपालीहरु आफ्नो घर फर्किरहेका छन् । उनीहरुको सम्मानजनक आवागमनमा ध्यानदिनुपर्छ । यस्तै भारतबाट आउनेहरुबाटै बढी जोखिम देखिएकोले अनिवार्य पीसीआर परिक्षण र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ ।अहिले सरकारले होम आइसोलेसनमा राख्ने भनेर निर्देशन दिएको छ ।
यसले प्रभावकारी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा भूमिका खेलेको देखिदैन । अर्को विकल्प अब बाँकेमा रहेका आर्मी र प्रहरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरुको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
भने भेरी र नेपालगन्ज सहितका अन्य अस्पताललाई पनि कोभिड अस्पतालको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अनुसार सम्बन्धित पालिकामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको संयन्त्र मार्फत क्रियाशिल हुनुपर्छ ।
सरोकारवालाको सार्वजनिक अपील
जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायहरुले बाँकेमा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्थार्ला देखेर चिन्ता प्रकट गरेका छन् । जिल्लास्थित स्वास्थ्यकर्मी, पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले सरोकारवाला निकायहरुके गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विभिन्न क्षेत्रका १० जना सरोकारवलाहरुले बाँकेमा पछिल्लो समयमा विभिन्न ११ वटा समस्या देखिएको र ती समस्या समाधानको लागि १३ बुँदामा सुझाएका छन् । उनीहरुले पीसीआर परिक्षण तीव्र बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सबै स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन र आइसोलेसनलाई सक्रिय गर्नुपर्ने, समाजमा रहेका विशेष क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न पहल गर्न, सेन्ट्रल कोभिड कमाण्ड विकास गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति खटाउनुपर्ने र अक्सिजन कम हुन नदिने लगायतका माग राखिएको छ ।
कोरोना कहर बढ्दो क्रममा रहेकोले सम्पूर्णले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनिवार्य मास्क लगाउने, स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भौतिक दुरी कायम गर्ने र आफू सुरक्षित रहने । कोरोनाबाट आफू बचौँ र अरुलाई पनि बचाऔँ । कोरोना संक्रमणमा सरकारी उपेक्षाको परिणाम हो, नेपालगन्जको अहिले परिदृष्य ।
प्रकाशित मितिः आइतवार, बैशाख १२, २०७८ 8:18:33 PM |
Posted in मुख्य समाचार, विचार, समसामयिक, समाचार
Prevउपचारकै क्रममा थप एक संक्रमितको कोहलपुरमा मृत्यु
Nextयोङ्ग कम्युनिष्ट लिगद्वारा सिडियोमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र